Landa amafayela kusuka kumaseva we-FTP ku-batch | Izindaba zamagajethi
/ Ungawalanda kanjani amafayela amaningi kusuka kumawebhusayithi afana ne-ftp?
Lapho sithola ifayela noma isithombe esilula esakha ingxenye yewebhusayithi futhi besikuthanda ukuba nayo kukhompyutha yethu, ngendlela elula kakhulu esingayilanda sisebenzisa inkinobho yegundane langakwesokudla kanye nemenyu yokuqukethwe efanele, okuthile okugijima kunoma yisiphi isiphequluli se-Intanethi. Manje, kuthiwani uma sithola amafayela amaningi athakazelisayo kuwebhusayithi ye-ftp?
Uma inani lalawa mafayela akwi-ftp server limbalwa, singasebenzisa iqhinga elifanayo esishilo ngenhla (inkinobho yegundane langakwesokudla), noma ngabe wonke lawo mafayela esezinkomba ezihlukile, umsebenzi wokwenza ukulanda kuzoba kukhulu futhi kube nzima ukukwenza. Ngokuncomekayo, kunezinhlelo zokusebenza namathuluzi avela eceleni esingawasebenzisa ukulanda ngobuningi, okungukuthi, wonke noma amafayela ambalwa aphethwe kule seva ye-ftp, into esizoyisho ngezinye izindlela ezingezansi.
1 Usebenzisa abanye abaphathi bokulanda
2 Usebenzisa i-Wget njengomphathi wokulanda
Usebenzisa abanye abaphathi bokulanda
Njengamanje kunenani elikhulu labaphathi bokulanda abangasisiza ukwenza lo msebenzi onzima, odinga kuphela ukuthi sisebenzise i-URL yendawo lapho kutholakala khona amafayela esiwadingayo. Sizoqala ngokusho abaphathi ababili bokulanda abasetshenziswa kakhulu okwamanje, abafanayo (ngeshwa) zihambisana kuphela neMozilla Firefox. Enye yazo inegama elithi "FlashGot" futhi ungayihlanganisa kwisiphequluli sakho se-Intanethi kusuka ku-URL yayo esemthethweni.
Lapho sesilanda noma sifaka le mphathi wokulanda kwiMozilla Firefox, kuzofanele siye endaweni lapho amafayela akhona bese sisebenzisa inkinobho yegundane elungile. Ngaleso sikhathi inketho izovela kumenyu yokuqukethwe nkuzokusiza ukulanda wonke amafayela kukhona okwamanje. Le ndlela isebenza kahle ngokuphelele uma engekho amafolda anamafayela afakiwe kuwo; I-DownThemAll! Yenza okuthile okufana kakhulu, okuyisengezo seMozilla Firefox.
Kunoma ikuphi, kufanele sichaze indawo kwi-hard drive yethu lapho sifuna ukuthi wonke lawo mafayela abanjwe kuseva ye-ftp agcinwe.
Usebenzisa i-Wget njengomphathi wokulanda
Enye indlela enhle etholakala kuleli thuluzi, enezici ezithile ze-anecdotal okufanele zishiwo njengesici se- «isiko jikelele». Labo ababonile itheyipu «I-Social Network»Kungenzeka ukuthi uqaphele ukuthi uMark Zuckerberg usebenzise leli thuluzi ukuze akwazi landa izithombe zabo bonke abafundi eyunivesithi yakho ukudala lokho akubiza ngaleso sikhathi "I-FaceMash«. Leli thuluzi belingahlukaniswa njengenye yezinto ezinzima kakhulu ngaleso sikhathi, ebingasetshenziswa abasebenzisi abanolwazi oluncane lwekhompyutha.
Ngenzuzo umqambi wakwazi ukuphakamisa inguqulo entsha yaleli thuluzi elifanayo, okwenza kube lula kuwo wonke umuntu ofuna landa amafayela abanjwe kuseva ye-ftp. Uzokwazi ukubona okunye kwalokhu kusikrini esizobeka ngezansi.
Ngasohlangothini kunezinketho ezintathu, okumele ukhethe eyokuqala (Okujwayelekile) ngokuhamba kwesikhathi, ohlangothini lwesokunene phonsa ku-URL yesayithi lapho kutholakala yonke impahla sifuna ukulanda (amafayela kuseva ye-ftp). Lapha futhi kuzodingeka sichaze indawo lapho sidinga ukuthi la mafayili agcinwe khona. Manje, ingxenye ethakazelisa kunazo zonke ekwithebhu ethi «Kuthuthukile»Kule ngxenye yohlangothi lwesobunxele.
Lapho uyikhetha, esinye isikhombimsebenzisi sizokhonjiswa ohlangothini olungakwesokudla nokuthi kuphi, kuzofanele silungiselele izinketho ezahlukahlukene ezikhona lapho ngokuya ngokuthwebula esikubeke phezulu. Ngalokho, uma ngabe le ndawo ye-ftp inezinkomba ezinamafayela afakiwe Kuzo, ngezinketho zokwenza ngokwezifiso esizenzile ngokuya ngalokho esikuphakamisile ngenhla, ukulanda kuzokwenziwa ngokuphelele.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » / Ungawalanda kanjani amafayela amaningi kusuka kumawebhusayithi afana ne-ftp?
Ungayihambisa kanjani i-Windows 7 hard drive kwenye ikhompyutha ngaphandle kokuphahlazeka
Ungayilanda kanjani i-Virus Definition ye-Antivirus ethandwa kakhulu